Waxaa aasaasay mid ka mid ah hoggaamiyayaashii ugu horreeyay ee shirkadda 3M, Machadka McKnight wuxuu leeyahay dib-u-habayn ku-saleysan qaabka ay u socoto.
Sannadkii 2013-kii siddeedkii sano ee la soo dhaafay, guddiga ayaa bilaabay geedi socodka taxadar leh, weydiiso: Maxaa sii dheeraan kara awooda aannu ku sii wadi karno hadafkeena hagaajinta tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka?
Sanadka 2014, McKnight Foundation waxay ku ballanqaadday in ay maal-galinayso $ 200 milyan (10 boqolkiiba oo ah $ 2 bilyan oo dollar ah) ee xeeladaha la jaanqaadaya howlgalka McKnight. Maalgashadaan waxay dhalinayaan dib-u-soo-celin lacageed, la kulmaan waajibaadkayaga aasaasiga ah, iyo in aan baranno barnamijka barnaamijka, dhammaanba inta aan sii wadno hawlgalkeenna Waxaan dooneynaa inaan soo saarno xariiq saddexle ah.
Maalgalin kastaa waxay leedahay dib-u-soo-celin dhaqaale oo la doonayo in la kulmo heerarka nalalka ah. Kala badh saameynta saameynteeda maalgashiga maalgashiga waa in ay ku soo noqotaa iyada oo la eegayo qiyaasta suuqa; Qiime kale ayaa qaadan doona halis dheeraad ah, iyo rubuca soo hartay waxay ku jiri doonaan maalgelinta la xiriira barnaamijka (PRIs), kaas oo lagu qeexay IRS inay tahay maalgelin aan ganacsi lahayn oo ujeeddo samafal ah.
Deegaanka & Soo Celinta Bulshada
Maalgalin kastaa waxay gacan ka geysataa xalinta dhibaatooyinka bulsho iyo / ama deegaan ee siyaabo dhiirigelin leh. Waxaan raadinaynaa maalgelin abuuraysa guryo la awoodi karo, oo gacan ka geysanaya dhismaha sii waarida degmadeena gobolka, kordhinta tayada tamarta, kor u qaadida jiilka la qaybiyey ee korontada, yaraynta khatarta kiimikada beeraha ganacsiga, ama ilaalinta dabiiciga iyo qoyaanka.
Warbixinta saameynta sannadlaha ah waxay muujineysaa sawir guud oo ku saabsan guusha ganacsiga. Waanu ururinaa xogta si aan u fahanno qiimaha muhiimka ah ee bulshada iyo deegaanka ee uu abuuray maalgelinta iyo ganacsiyada aan maalgashadeyno. Waxaan dooneynaa inaan ilaalino shuruudaha cabbiraadda fudud, faa'iido leh, iyo waarta.
Soo Celinta Waxbarashada
Maalgashad kastaa waxay siisaa barashada qoto dheer ee aasaasiga ah ee ku saabsan kala duwanaanshaha suuqa iyo fursadaha, iyo sidoo kale xalal gaar ah. Maalgashiga iyo deeq bixiyeyaasha ayaa si firfircoon u shaqeeya si ay u qabtaan oo u abaabulaan aragtiyahan. Waxaan rajeyneynaa in waayo-aragnimada suuqa ay wax ku kordhineyso, dhaqaale badan oo waxtar leh. Waxaa intaa dheer, sida aan ka faa'iideysanay aqoonta iyo khibradaha dadka kale, waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mid ah hawlgalkeena si aan ula wadaagno dib-u-celinta waxbarashada.
“Fikirka dugsiga hore ayaa weyddiinaya bal in maamulaha maalku guuleysan karo inkasta oo tixgalinta waarta lagu jiro. Xaqiiqdu waxay tahay, waa macquul in guul la gaaro maxaa yeelay.
Isha: & #8220; Wadashaqaynta Joogtada ah, Waxqabadka Aan Caadiga Ahayn & #8221;